Ukuphupha ngenkawu Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Imbali yokukhula komntu inxulumene ngokusondeleyo naleyo yenkawu, yiyo loo nto inkawu ikwasiso isilwanyana esifana ngokusondeleyo nomntu.
Kuba abantu bayinzala yeenkawu, kusekho izinto ezininzi ezifanayo ezinokwaziwa. Olunye uhlobo lweenkawu oluye lwaphucuka, olufana neetshimpanzi neegorila, lulo olugobileyo kodwa oluthe nkqo; Nangona kunjalo, ezi ngokubanzi azinamsila mde ngazo, njengezinye izinto eziqinisekileyo, ezinokuthi zijike kamnandi emthini ziye emthini. Nangona kunjalo, phantse zonke iinkawu ziyakwazi ukunyuka.
Iinkawu ngamanye amaxesha ziziphatha njengenkawu, ziyabaxa kwaye, kuxhomekeke kuhlobo lwenkawu, nokuba ikratshi elinekratshi. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, sithanda ukubhekisa kumntu ongaxakekanga okanye kwi-gannet njengenkawu. Kwiimuvi nakwiincwadi, inkawu ihlala iboniswa njengesidenge, isilwanyana esidlalayo siphethe ibhanana. Njengesekisi okanye umtsalane wezu, isilwanyana sasigcinwa kwiikheji ukuza kuthi ga namhlanje.
Ubudlelwane phakathi kwabantu neenkawu buhluke kakhulu kwiinkcubeko ezahlukeneyo kwaye butshintshe amatyeli aliqela kule minyaka idlulileyo. Ngelixa inkawu yayithathwa ngokuba yeyesidenge kumaXesha Aphakathi njengoko yayiluphawu lwesilwanyana esinesono, yayisanqulwa kumaxesha amandulo nothixo ukufa Thoth. Ngelo xesha inkawu yatolikwa njengesilumkiso ngokuchasene nokufa kwabantu.
Ngendlela: kwanebhegi yesikhumba enxitywe ngamajoni ihlala ibizwa ngokuba yi "jumpsuit." Ukuba ufumene ubhaka onjalo ephupheni, jonga ukutolikwa kwamaphupha "kubhaka".
Njengophawu lwephupha, inkawu ibonakala rhoqo xa ilele kwaye ikwakhona ikakhulu ukuze ibonwe njengomqondiso welinye icala lephupha. Makhe siqale sijonge amaphupha avela rhoqo rhoqo ngokunxulumene nesihlobo. Mhlawumbi iphupha lakho likho? Ukuba akunjalo, funda imiba yokutolika ngokubanzi ezantsi kweli phepha.
1 Uphawu lwephupha «inkawu»: elona liphupha liqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Iinkawu ezinkulu: izilwanyana ezinobuntu kuhlalutyo lwamaphupha
1.2 Iinkawu ezinoxolo kunye nokudibana okuhle nomntu ophuphayo
1.2.1 Ukuwola inkawu kwilizwe lamaphupha
1.2.2 Nceda, inkawu iyandiphuza ephupheni!
1.2.3 Iinkawu ezilusana zifuna uthando! Iphupha elihlaziyayo
1.3 Iinkawu ezinobundlongondlongo njengengozi kubaphuphi
1.3.1 Inkawu yandileqa kwihlabathi lamaphupha
1.3.2 Iinkawu ezothusayo ephupheni eloyikekayo.
1.3.3 Inkawu indihlasela, iphupha elibi
1.4 Kutheni inkawu indichamela? Ukuchazwa kwephupha kuchaziwe
1.5 Simahla okanye sibanjiwe? Inkululeko yokuhamba kwenkawu yamaphupha.
1.5.1 Inkawu yasendle ihamba kwilizwe lamaphupha.
1.5.2 Inkawu ebanjiweyo: isilwanyana esiphuphayo ehokweni
1.6 Ubungakanani benkawu kwindawo yokuphupha.
1.6.1 Wow, enkulu kangakanani ... iinkawu ezisindayo nezinamandla emaphupheni
1.6.2 Inkawu encinci, oh intle kanjani! Uhlalutyo lwakho lwamaphupha
1.7 Iphupha malunga neenkawu ezintle ezinamaphiko
2 Uphawu lwephupha «inkawu» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «inkawu» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «inkawu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inkawu»: elona liphupha liqhelekileyo malunga nesimboli
Iinkawu ezinkulu: izilwanyana ezinobuntu kuhlalutyo lwamaphupha
Iigorila kunye neeorangutan ngamalungu amangalisayo osapho olukhulu lweenkawu. Iigorila ezinkulu nezomeleleyo zibonwa ngabantu abaninzi njengezothusayo kwaye ziyingozi. Ke ngoko, ayimangalisi into yokuba la marhamncwa asendle aluphawu lweemvakalelo ezingalindelekanga kunye nokuzimisela ukusebenzisa ubundlobongela ekuchazeni amaphupha. Ukuba iorangutan ekrelekrele ibonakala ebusuku, esi sisilumkiso. Awunakho ukukhohliseka ngoku. Abantu abanobuqili bafuna ukwenzakalisa umntu ophuphayo.
Iinkawu ezinoxolo kunye nokudibana okuhle nomntu ophuphayo
Ukuwola inkawu kwilizwe lamaphupha
Ukubetha umntu ngesiqhelo kubonisa ukusondela kunye nonxibelelwano. Amaxabiso kunye neenjongo eziqhelekileyo zenza unxibelelwano olusondeleyo. Umntu onothando kunye ne-primate ephupheni, angathanda ukubuyela kwicala lakhe lasendle kunye nelingenasidima ngolonwabo.
Nangona kunjalo, ukuphulula inkawu kunokubonisa isilumkiso kutoliko lwamaphupha ngokubanzi: ngokunxulumene nesilwanyana, isilumkiso asikuko "ukulinganisa" abanye abantu. Oku akunakwenza ukuba uthandwe.
Nceda, inkawu iyandiphuza ephupheni!
Ukwanga kwenkawu ngaphakathi el mundo Ukuphupha kunokuba yinto elungileyo. Ukuba uyakonwabela ukubethwa sisilwanyana ngokupheleleyo, uziva ukulungele ukwamkela inkanuko kunye neminqweno. Umphuphi useluxolweni nelakhe icala elingathintelwanga nelingokwemvelo. Ukuba, kwelinye icala, unxibelelwano olusondeleyo kunye ne-primate lubonwa njengezothe, oku kubonisa ukungalingani ngokweemvakalelo.
Iinkawu ezilusana zifuna uthando! Iphupha elihlaziyayo
Imfuyo yabantwana imnandi nje. Bavusa ubume bendalo obukhuselayo kwaye kwangaxeshanye basikhumbuza ngemvakalelo yokungakhathali yobuntwana. Nabani na okhathalela usana lweenkawu kwilizwe lamaphupha uya kufuna ukuthatha uxanduva olukhulu. I-primate esandula kuzalwa ichaza utshintsho olubalulekileyo kumphuphi. Kwangelo xesha, njengesilwanyana sephupha, inkawu emnandi ingalumkisa umntu oleleyo ukuba angaziphathi njengomntwana kwaye engakakhuli ngokwenyani.
Iinkawu ezinobundlongondlongo njengengozi kubaphuphi
Inkawu yandileqa kwihlabathi lamaphupha
Ukuba inkawu ikulandela xa ulele, ubaleka ngokukhawuleza okukhulu. Ukutolikwa kwephupha kuyakubona kule moya yokubaleka kwiimpawu ezithile zabalinganiswa. Kungenxa yokuba inyani liqalise ukuleqa ebusuku, malunga neempembelelo ezicinezelweyo okanye iindlela ezithile zokuziphatha kubomi bemihla ngemihla. Ngokufanelekileyo, lowo uphupha ngokungxama ephupheni uyazazi iindlela zakhe zokuziphatha ezimbi, kodwa unokubaphepha nje ngobunzima.
Iinkawu ezothusayo ephupheni eloyikekayo.
Nabani na olunywe yinkawu ephupheni ufumana isilumkiso esicacileyo. Kukho into engalunganga kwindawo abahlala kuyo. Kufanelekile ukujonga ubuhlobo kunye nokujonga ngenyameko ubudlelwane bothando. Ukulunywa sisilwanyana kumava ephupha kunokuba ngumqondiso wobukhwele nokungangqinelani kwimiba yeqabane. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, inkanuko kunye nokuthanda kunokungahoywa xa inkawu ingena kwihlabathi lamaphupha.
Inkawu indihlasela, iphupha elibi
Ukujika kuhlala kusoyikisa. Ngokukodwa xa inkawu enomsindo iqala ukuhlasela. Kodwa musa ukusasaza. Imeko yamaphupha kunye nenkawu enoburharha inokunika imikhondo malunga noko woyikayo. Mhlawumbi woyika ukuba iimvakalelo zakho zingaqhuma kuwe. Okanye woyike ngokufihlakeleyo uhlaselo oluvela ngaphandle. Izilwanyana zasendle zihlala zibonisa abantu abangacingeliyo phakathi komntu oleleyo.
Kutheni inkawu indichamela? Ukuchazwa kwephupha kuchaziwe
Ngokuqinisekileyo umntu uyacaphuka ekuqaleni ukuba inkawu iyamchopha xa elele. Kodwa iphupha kufuneka lihlale lizolile, kuba isilwanyana sephupha sifuna ukunceda kuphela. Oku kubonakala ngathi kukrwada kule nkawu kunokwazisa ngeengxaki zesini. Iminqweno engalawulekiyo kunye neminqweno efihlakeleyo ifihlakele kwimbonakalo yomntu kwaye ekugqibeleni ufuna ukukhutshwa, okufuziselwa ngumchamo wezilwanyana okhutshelwe kumnyhadala wephupha.
Simahla okanye sibanjiwe? Inkululeko yokuhamba kwenkawu yamaphupha.
Inkawu yasendle ihamba kwilizwe lamaphupha.
Ukuhamba ngokuzolala ngokuzolileyo kwaye ungangxamanga kubonakalisa ukukhula okunempilo okuqhubekayo kwinqanaba lesigaba sobomi. Ukuba uphupha inkawu ebalekayo, ibonisa indlela yakho yobuqu ngeendlela ezingafunyaniswanga zangaphambili zomlinganiswa wakho. Ubungangamsha buqondisa ukujonga kohambo lwangaphakathi kwicala elingenakoyiswa lomphuphi. Lixesha lokuba ufunde ngakumbi ngesilwanyana kuwe.
Inkawu ebanjiweyo: isilwanyana esiphuphayo ehokweni
Ukuba uhlangabezana nenkawu evalelwe ehokweni ephupheni, oku kunokuba sisimemo somntu oleleyo ukuba amkele kwaye enze amandla abo ezilwanyana kunye nezibongozo ebomini bokuvuka. Ngokunokwenzeka, umphuphi uziva eneentloni kakhulu kubomi bokwenyani ukuze athathe inxaxheba kwisistim sezesondo. Mhlawumbi usebudlelwaneni bothando apho umanyano olusondeleyo noluthembekileyo alunakwenzeka. Ikheji apho isilwanyana esilalayo sibanjwe khona sibonisa imvakalelo yokulala komntu ukuba bathintelwe ngelixa bevukile.
Ubungakanani benkawu kwindawo yokuphupha.
Wow, enkulu kangakanani ... iinkawu ezisindayo nezinamandla emaphupheni
Iinkawu ezinkulu ezifana negorila okanye iorangutan zinokoyikisa xa uzifumana endle kwaye ngaphandle kwemivalo, ngapha koko, izilwanyana ezinzima zinamandla amakhulu. Ukuba umphuphi woyika inkawu enkulu, enokuthi isabele ngokungalawulekiyo, ke umntu ekuthethwa ngaye uhlala efuna ukuzidibanisa ekuvukeni ubomi ukulawula iimvakalelo zakhe. Nangona kunjalo, ukuba yinkawu enkulu ezolileyo ethanda uxolo, umntu oleleyo uyakwazi ukuzibamba kwaye enze ngobulumko nangobulumko kwiimeko ezinzima.
Inkawu encinci, oh intle kanjani! Uhlalutyo lwakho lwamaphupha
Ukuba inkawu ibonakala kuwe xa uphupha njengenkawu, isilwanyana sinokuba ngumqondiso wokukhula kwakho. Ukuziphatha kwebhokhwe kubalulekile ekutolikeni "kwenkawu encinci" isimboli yephupha. Ukuba isilwanyana esincinci sihamba ngokukhawuleza, oku kuhlala kungumqondiso wokomeleza ubudlelwane obunothando.
Inkawu yokudanisa, ehlala ibonwa kwindawo esekisini, ingabonisa uvuyo joie de vivre, ngelixa ukuluma kwenkawu encinci kunxulumene nengxabano engathandekiyo. Ngokunokwenzeka, inkawu ephupheni ikwalatha kumntu olincoma kakhulu iphupha; nangona kunjalo, ukuncoma kuyaxoka.
Iphupha malunga neenkawu ezintle ezinamaphiko
Ukubhabha kwihlabathi liphela kube kanye, kuya kuba kuhle! Obu buchule ngokubanzi bumele inkululeko ekuchazeni amaphupha. Ukuba uphupha inkawu enamaphiko, iingxaki ziya kunyibilika kwikamva elikufutshane ngolonwabo olukhulu. Ixabiso lokubhabha libonisa uloyiko lokuhlala ungaqondwa kakuhle ngabanye. Amaphiko abonisa ukuba ezi nkxalabo kungekudala ziya kuba yinto yexesha elidlulileyo.
Uphawu lwephupha «inkawu» - ukutolikwa ngokubanzi
Amaphupha enkawu aqhelekile, kodwa ukutolika ngokuchanekileyo, indlela yokuziphatha kweenkawu ephupheni kubalulekile. Ngaba inkawu ifuzisela isilwanyana kwaye ibonakala njenge Isondo lesini, ke oku kutolikwa njengophawu lonxibelelwano lwephupha, apho kukho ukusilela kweemvakalelo.
Ukuba iphupha lilunywe yinkawu, umfanekiso wephupha ufuna ngaphambili abahlobo bobuxoki kwaye ulumkisa ngokuhanahanisa. Ngokubanzi, iinkawu ezinobundlongondlongo, nokuba zisongela nje kunokuba zilume, zilumkisa ngokukopela kunye nokuxoka kwindawo yokuhlala.
Ukuba iphupha elo libona iinkawu zidlala kwaye zitsiba ukusuka kwisebe ukuya kwelinye kwisebe, oku iba luphando lwamaphupha njengokunqwenela ngokwakho. ebuntwaneni itolikwe. Ngokwesiqhelo oku kukwangumqondiso wokuba iphupha lalifutshane kakhulu ebuntwaneni kwaye kwafuneka likhule ngokukhawuleza.
Iphupha lenkawu linokuthetha ukuba iphupha eli lixelisa abanye abantu rhoqo, ke «nachäfft«Kwaye akanguye. Ngamanye amaxesha inkawu iyatshintsha kwihlabathi lamaphupha kwaye iya isiba ngabantu ngakumbi nangakumbi. Kule meko iphupha litolikwa njengophawu lokuba eli phupha liyalazi icala lesilwanyana.
Uphawu lwephupha «inkawu» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngephupha, inkawu ephupheni ifanekisela umntu engenampucuko, ilawulwa ngumtsalane kwaye ijolise kwinzuzo yemali kuphela. Umzekelo, lo mntu unomdla wenkcubeko okanye iinjongo zokuziphatha ezimbalwa. Umfanekiso wephupha unokucela iphupha ukuba likhule ngakumbi kwaye likhule ngakumbi.
Ngokwesiqhelo inkawu imele uhlobo lwepopayi yephupha ngelixa ilele kwaye ibonisa Shoot y Ukuthanda. Ke ngoko, ukuba "ichanekile" kwaye itolike ngokugqibeleleyo, umntu kufuneka asoloko ejonge indlela yokuziphatha kwenkawu ephupheni.
Olu phawu luphupha lunokuba sisalathiso soloyiko lokuba umntu ophuphayo kwihlabathi elivukayo woyika ukungakhathali kwaye angaqondwa ngoontanga babo. Mhlawumbi abanye abantu bayalihlekisa ngephupha kwaye uziva kakubi.
Uphawu lwephupha «inkawu» - ukutolika kokomoya
Inkawu ifuzisela ukutolikwa kokomoya isilwanyana ebantwini, oko kukuthi, isilwanyana, Icala lezilwanyana yobuntu.